Martial Arts ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Shang-Chi ကတော့ MARVEL Strike Force မှာ Battle ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ! | Codashop Blog MM
Home Games Martial Arts ...
Martial Arts ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ Shang-Chi ကတော့ MARVEL Strike Force မှာ Battle ဆိုင်ဖို့ အသင့်ပါဘဲ!
ကဲ Commander တို့ရေ MARVEL Strike Force မှာတော့ Shang-Chi ရောက်ရှိလာပြီး နေ့သစ်တွေစတင်တော့မှာပါ။ လက်ဝှေ့မှာဆို ကမ္ဘာပေါ်မှာ အတော်ဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရမယ့် Shang-Chi တစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ Martial Arts ကို တစ်ဖက်ကမ်းခပ်ကျွမ်းကျင်ခြင်း၊ သူ့ကို Superhuman တစ်ယောက်လိုအားအင်တွေပေးနိုင်တဲ့ Chi ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းတွေနဲ့ မစ်ရှင်တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
Shang-Chi ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ?
နောက်ကြောင်းကို ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Shang-Chi ဆိုတာက အလွန်ဆိုးသွမ်းပြီး သက်ဆိုးရှည်တဲ့သူရဲ့ သားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ Shangi-Chi ရဲ့ အဖေရဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းကြီးမှာ သူ့ကို လူသတ်သမားတစ်ယောက် ဖြစ်စေဖို့ သင်ကြားထားတာပါ။ Shangi-Chi က Martial Arts ကို ကောင်းမွန်စွာ လေ့ကျင့်ခဲ့ပေမယ့် သူ့အဖေရဲ့ မကောင်းတဲ့ အစီအစဥ်ကို သိရှိသွားတဲ့နောက်မှာတော့ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး ဘ၀ကို ငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ သူက Heroes for Hire ဆိုတဲ့အဖွဲ့နဲ့ လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။
Strike Force မှာ Shang-Chi က Brawler တစ်ယောက်အနေနဲ့ပါ၀င်ပြီး Heroes for Hire အဖွဲ့ရဲ့နောက်ဆုံး အသင်း၀င်အဖြစ်ပါ၀င်ခဲ့ပါတယ်။ သူက Battle ကို Health ၊ Damage နဲ့ Speed အမြင့်ဆုံးတွေကို ယူဆောင်လာပြီး အဖွဲ့ ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။ သူ့ရဲ့ Ultimate Ability ကတော့ Unblockable Chain Attack ကို ရရှိစေပြီး ရန်သူကပြန်လည် မတိုက်ခိုက်စေနိုင်ပါဘူး။
ကစားသမားတွေက Shang-Chi ရဲ့ Ability ကို ပိုတိုးအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ သူ့ကို Heroes for Hire အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်နဲ့ အတူထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက ရှောင်လွှဲလို့မရနိုင်တဲ့ Iron Fist’s ultimate ကို ပြောင်းနိုင်ပါတ​ယ်။ Heroes for Hire အဖွဲ့၀င်က 60% အောက်ရောက်သွားရင် Luke Cage ရဲ့ Taunt mechanic: Gaining Taunt ကိုလဲ ပွင့်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Primary Target ကို 100% damage နဲ့ တိုက်ခိုက်နိုင် + apply Slow
Primary Target မှာ positive effects တွေရှိရင် +25% Extra Crit Chance တိုးပါတယ်။
Primary နဲ့ adjacent target တွေကို 80% damage အထိ တိုက်ခိုက်ပါ။
ကိုယ်တိုင် နဲ့ အဖွဲ့၀င်ကို Negative Effect တစ်ခု ရှင်းပေးပါတယ်။
အများဆုံး5အထိ +1 Counter တိုးပါတယ်။
War ကာကွယ်ရေးမှာ :
ဒီ တိုက်ခိုက်မှုက ထိခိုက် ဒဏ်ရာအများဆုံး ၊ ပြန်ခေါ်လို့မရတဲ့ ရန်သူ တွေကို အဓိက တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုက Taunt နဲ့ Stealth ကို ဂရုမစိုက်ပါ။
ရန်သူတွေအားလုံးကို 90% damage တိုက်ခိုက် တဲ့အပြင် + 25% အပို damage per positive effect from the primary target + ရန်သူတိုင်းရဲ့ Speed Bar ကို 5% လျှော့ချပေး။ Heroes for Hire အဖွဲ့၀င်တွေအားလုံးကို ၂ ခါစီ Speed တိုးပေးပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုက ပြန်လည် ခုခံတိုက်ခိုက်လို့မရသလို တာစီးရှောက်တိမ်းလို့လဲမရပါ။
ရန်သူတိုင်းရဲ့ Speed ကို 15% လျော့ချပြီး Primary target ကလာတဲ့ Positive effect တစ်ခုကို 50% အပို Damage ပေးပါတယ်။
တစ်ကောင်က Deflect သွားရင် +5% Crit Chance နဲ့ +5% Block Amount ကိုရမယ်။
War ကာကွယ်ရေးမှာ Heroes for Hire အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ယောက်က Deflect သွားရင် ထို ဇာတ်ကောင်က +5% Crit Chance တိုးပြီး +5% Block Amount ရရှိမှာပါ။
MARVEL Studio ရဲ့ Shang-Chi and Legend of the Ten Rings က ရဲ့ Battle Armor costume တင်ကို အခြေခံပြီး ဒီဂိမ်းမှာ Shang-Chi ရဲ့ ပထမဆုံးထွက်ပေါ်လာမှုမှာ ပြထားပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ကိုစက်တင်ဘာ (၃) ရက်နေ့ကစပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရုံတင်ပြသခဲ့ပါတယ်။
Shang-Chi က သူ မထင်ထားခဲ့တဲ့ အတိတ်ကို ရင်ဆိုင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ Ten Rings အဖွဲ့အစည်းထဲကို ၀င်ရောက်ခဲ့စဉ်တုန်းက ဒီယူနီဖောင်းကို ၀တ်ခဲ့တာပါ။
သင့်ရဲ့ Power Cores တွေကို Codashop မှာ ဖြည့်လိုက်ပါ!
သင်တို့ အားလုံးအတွက် သတင်းကောင်းပါ! ယခု သင်တို့ရဲ့ MARVEL Strike Force Power Cores ကို Codashop မှာ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ သင့်ရဲ့ Strike Force User ID ကိုရိုက်ထည့်ပါ၊ သင်၀ယ်ယူလိုသော Power Cores ပမာဏကို ရွေးပါ၊ ငွေပေးချေမှုပြီးဆုံးအောင်လုပ်ပါ။ Power Cores ကို သင့်အကောင့်သို့ ချက်ချင်းပို့ဆောင် ပေးပါလိမ့်မယ်။ x
Previous articleCodashop က Epic Skin အမိုက်စားနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကိုတက်လှမ်းသွားပါပြီ!
Next articleFree Fire မှာ မကောင်းဘူးလို့ နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ ဒီသေနတ်တွေကို မ၀ယ်ခင်မှာ စဥ်းစားပါ